Dzidzisai Muiti: basa description, mabasa, kodzero
Basa rekuita, Basa zvakanaka
Dzidzisai Muiti - iri rinokosha chaizvo uye rakaoma. Vose nuances uye peculiarities basa iri chichakurukurwa munyaya ino.
Ndiani munyori nezvitima?
Sezvo inogona muchidimbu sechinhu basa? Kana isu kutora pamutemo mashoko, kwakabva compiler of chitima - munhu mubasa nokuumbwa uye pokufa rinopfungaira wemari. Ndizvo zvose basa chiremba anonzi permutation chitima motokari, kwete hazvo neimwe kuitira. Chokwadi, kuita izvi chete kana uine ruzivo uye mushure vazotaura.
basa iri kuonekwa dzakakomba zvikuru uye mutoro. The huru dambudziko rakatarisana nyanzvi - nguva ino kutumira murwiyo. Panyaya iyi, iyo compiler pamusoro zvitima uye ndiye anokonzera kuvimbika chitima, ayo kukwana, ayo kuchengeteka uye kururama panguva anofambisa. Inoda nguva kuti aone Formulations munguva patsanura uye batanidza motokari chaizvo akamedura shangu.
About mabasa nyanzvi
Zvakakodzera nezvokukundwa zvitima uye mabasa Muvambi. Mabasa ari nyanzvi zvechokwadi yakawanda: chokwadi, ndiyo kunyatsoshanda kuti nezvitima kunoenderana payo. Pano inongova mimwe huru mitoro mumiririri wokupupura pasi kukurukurwa:
Kushanda miseve shanduro kuti non-centralized.
Panguva Chaiyo murindi nengoro muchitima akamedura shangu.
Kuona ngozi uye pamusoro nziyo.
Uncoupling uye cavil motokari.
Shanda kana kusandura Kuronga zvitima - Lead locomotive anofambisa.
Chokwadi, pane munhu anogadzira nezvitima uye mamwe mabasa akawanda uye mabasa. Zvisinei, mari kuchaenderana panzvimbo yavo basa chete, kureva kubva yemapurisa, uye nharaunda umo riri.
Working Day: kubvuma uye chokuendesa basa
Dry mazita huru nyanzvi mabasa kana vopa pfungwa basa, zvikuru zvishoma. naizvozvo zvakafanira kuti kurondedzera zvakananga nyanzvi nguva, kuti anotaridzika sei sezvo kunze wakaisa.
Saka kudzidzisa compiler rinotanga ake zuva kushanda okutambirwa kuchengeteka vazotaura. Izvi zvinoitika panguva kuronga musangano unokosha. Pashure paizvozvo, mushandi mumwe nomumwe anopiwa Yaunoti "uwandu muchinyatsongwarira kuzvidavirira" uye kwaanogara ezvingoro. Rinotanga kuronga remangwana kushanda wose mabasa pamwe pabasa nomusi yemapurisa. Unosanganisira, sezvinoita mutemo, vachiongorora motokari dzavo yokuzvigadzirisa, coupling, uncoupling, etc.
Zvinofanira kucherechedzwa kuti ose chiito kuti compiler machisi chitima kubudikidza redhiyo pamwe basa. Basa zvechokwadi zvakawanda, uye vawane kufinhikana vaiona mumiririri basa iri zvechokwadi kwete kubudirira. Uye kuwedzera kwerunyararo motokari, zvakafanira kuti agadzirire nziyo, nounyanzvi kuzadza ledger, tarisa vakagamuchira motokari - uye kuva nechokwadi kuti pachako! Nokudaro, nyaya pachiteshi mushandi ane mugove zvechokwadi.
Job Description nezvitima munyori prescribes kuti kuitwa basa nguva dzose anogadza uye unocherekedza musoro yemapurisa, maererano nemashoko ose uye mirayiro. Nokuva basa mushandi vanosungirwa kuongorora mamiriro ose motokari yavo nzvimbo, Kuwanikwa midziyo uye anokosha zvisimbiso pamusoro michina. Uchiita basa rinoitwa chete pashure kuongorora murwiyo, placement kuti ngoro munzvimbo nokuchengeteka maererano mitemo.
unhu anofanira chitima compiler chii?
Kufanana mimwe mushandi, kunodzidzisa compiler varidzi zvimwe unhu uye unhu husina. Asi chii chaizvo? Wokutanga Zvechokwadi, kuvimbika uye kutarisirwa. Chete izvi zviviri ndichakuita mukuru professionalism. Asi usakanganwa pamusoro hwokukurukura, kukwanisa kubata kushushikana uye kunetsana. Chokwadi kuti zvakafanira vanhu basa. Kazhinji zvakakosha, uye kutarisira mushandi yacho inokodzera sezvinotevera: zvingava vanachiremba hwakaderera zvinoyerera kana Assistant nezvitima compiler.
Chokwadi, munhu anogona kuita chikanganiso. Uye zvikuru huta nokuda kuti chero zvazvingava haumanikidzwi - zvichaita chete sembura zvinhu. Just zvakadai unhu sezvo mupfungwa, kuchabatsira kuti vawane tinzwisisane pamwe navo. Kudzikama uye akanyora chinokosha nehanya iri basa. Kunyange kuva inotonhorera. To basa rakanga chikwata, vakarongeka uye rakanyatsorongwa, zvinokosha kushanda achinyanya pachavo, nemaitiro avo.
Apo Ndinogona kudzidza kuchinjanisa?
Basa "shunter" kunoda dzidzo zvairayirwa. Uye chii chaizvo? On ichi uye ichakurukurwa pashure. Kuti aende kukoreji kana zvekushandisa chikoro, kwete kuti chikoro makirasi zvose vanegumi nomumwe. Makore mapfumbamwe kuva chakanakisisa chikonzero kubvuma kuti Railway College. The masangano zvedzidzo kuti kudzidzisa zvitima compilers, kupa ruzivo inotevera inokosha:
kushandisa dzinokosha inzwi uye ruoko anonongedzera;
Manual kwebasa locomotive;
kushandisa akamedura shangu;
kushandiswa inotakurika maredhiyo;
nomazvo kunyorerana nziyo pamusoro njanji;
kuona vakachengeteka nenhumbi, avo vachidzikisa.
Zvinofanira kutaridzwa INDICATIVE mazita vanotongwa iro achaverengwa hurukuro:
OBZH kana BC.
The chairema mitoro mota dzavo yokuzvigadzirisa.
About kuhondo muna basa
Sezvo zvimwe ounyanzvi hwokugadzira dzakawanda, pane zvimwe matomu ari compiler pakati zvitima. Kune vana:
3 buditsa. Mumiririri yakadereresa chinzvimbo rake basa basa muzvinhu zviduku kokushambadzira munjanji, une panguva iyoyo haisi vakawanda kushandiswa. Saka, kukura kwebasa mushandi rechitatu buditsa zvishoma zvishoma.
4 chikamu kunoratidzwa ndechokuti tinofanira kushanda vatakuri rails vasiri zvakajairika, asi mune nerongo munzvimbo. Saka, nokuda kunzwisisa kushanda kana tichienzanisa yechitatu zvinoyerera anowedzera chaizvo.
5 buditsa. Nyanzvi kushanda njanji atova paruzhinji. Zvisinei, basa riri kuitwa pasi arambe achirema nzvimbo, kureva apo vanachiremba kushanda rwechitatu.
6 buditsa. Yokuisira pakuyerera ichi, rokupedzisira uye zvakaoma zvikuru basa zvakasimba dzinodiwa paruzhinji njanji senga.
Saka, muvambi nezvitima zvakasiyana siyana mabasa. Zvakare, kupatsanura pasi mumapoka unokubvumira kuvaka kwegadziriro ukama pakati Vakuru uye pasi. Vamiririri venzvimbo iyeye misoro anogona ngaateme pasi vashandi Chinyorwa hwakaderera zvinodiwa. Zvisinei, zviri, zvakare, kubva yemapurisa, uye nharaunda umo yemapurisa iri.
Kodzero muvambi nezvitima
Instructions Vamiririri vaiona basa vaite vashandi nekodzero. Next chichasimbiswa kuziviswa mashomanana, inokosha kodzero muvambi nezvitima. Saka, mushandi anekodzero kukumbira kuti zviremera vaifanira kushandisa midziyo, zvinoti:
rinokosha kushanda chimiro;
redhiyo uye Portable redhiyo nezvimwe nenhumbi.
The mushandi anekodzero ikwidzwe chichemo kana asina chavanopinda yakapiwa muchimiro overalls, shangu, zvichikurukura okunze, etc. Guard nezvitima compiler basa rwunokwanisa kwakavakirwa kodzero yokupedzisira. Zvinofanira kucherechedzwa kuti yemapurisa mushandi anenge chinokosha kodzero akadai mabiko uye kuguma pabasa usingashandi nguva uye vaine mutinhimira yose chechitima. Zvichitaurwa zviri nyore, kutanga uye kuguma basa anofanira yakakodzera uye nyanzvi kushanda maawa haafaniri kupfuudza vasingambooni chakaipa nazvo.
Pane dzimwe zvainovhiringidzawo basa nezvitima compiler. Chokwadi, havana Zvisinei havasi kudaro zvikuru,, anoratidza zvinokosha:
High basa. Basa nezvitima compiler rakanyatsojeka zvakaoma, uyezve, zvinokosha chaizvo. Zvinonzi kunzwisisa basa iri pamwe basa. Sezvingatarisirwa, dzakanga pachinzvimbo chevatatu, hwepamusorosoro basa asi ruzivo anoita pachayo akanzwa. Nokufamba kwenguva, basa racho hazvirevi sokuti rairwadza akadaro uye kunzwisisa.
Physical basa. Vaiona basa zvakaoma chaizvo uye varume zvechokwadi. Ndokusaka basa kazhinji kuti ruoko. Musakanganwa pamberi usiku panofamba, izvo unogona zvikuru inonetesa.
Chokwadi, pane vari compiler basa nezvitima uye nezvimwe pezvatinokanganisa zhinji. Asi vakawanda vavo vari kuzviitira, saka imi regai zviripo.
Basa nezvitima compiler rakanakira zvakawanda. The chikuru zvakanakira kushanda dzinosanganisira:
mari Good. Mubayiro atakurukura ari nyanzvi here. Zvisinei, chaiyo nhamba havasi kubuda; zvose zvinoenderana nharaunda, vakawanda nzvimbo, uyewo aivapo buditsa. Vazhinji compilers nezvitima nharo kuti mari dzavo dzakakwirira zvakakwana kuti kuramba kushanda.
Kudiwa. chinhu ichi hachisi kure Hadzisi zvachose; asi basa zviri kudiwa pabasa pamusika. Kazhinji panguva chitima dzemapurisa havana zvakakwana unyanzvi vanokwanisa avo vakakwanisa kuronga yakajeka uye kwakarongeka basa.
The kukurukurirana netsvimbo. Vashandi vakawanda vanobvumirana kuti basa inova kufarira zvikuru nokuti kuti ane chakanaka tsvimbo imwe, ushamwari. Uye ndiyewo chiremera basa.
Paul School Bazhenov - musimboti mugeri kuti unyanzvi uye umhizha
Restaurant maneja: basa, kuzvidavirira. How dzitarisire resitorendi?
Basa "gweta": zvayakanakira nezvayakaipira, tsananguro mabasa uye mabasa
Zvokuita kuti mari kumba?
Ndeipi avhareji muhoro muUnited States kana zvakanaka uko hatizi
Department of "International Relations": iri basa. Chii dzakagadzirirwa inotengwa pashure pokupedza kudzidza kubva fakaroti?
Carnival zvokupfeka nokuti vakuru: mikana outfits
Types Gorizonatlnyh inopofumadza
Sezvo kumba kuti French? French pamusoro zvipikiri - Photo
Swedish Korol Karl 12: Biography, nhoroondo, mapikicha, makore oupenyu hwake, uye ushe
How kudya papaya kuti kwete chete kuda kuravira, asiwo kunonyanyisa vabatsirwe.
Pulmonary edema sei: Zviratidzo
"Kuchinja kune 0" kuti "megaphone". Mutero urongwa "yezwi Zero"
Handidi kushanda, kana razocharovnie kupi basa anoita?
The Corolla idzva muna 2013 sezvo motokari ramangwana
Mudziyo nokuti rokuvaka: mhando, marudzi uye zvinhu
Girasi mite - chinhu chisingafadzi
How kurapa chakuvhe munzeve?